Art is My Life: နိုင်ငံကျော် သတင်းထောက် တစ်ဦး၏ ဖွင့်ဟ၀န်ခံချက်
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 10:21 PM
ခုခေတ်သင်္ကြန်က ပိတောက်နံ့ထက် ဘီယာနံ့က ပိုသင်းနေသလိုပဲနော်.
u blog ko i akhu hma tay char read ya tal...ayin ka i use ta` computer hmar myanmar font ma shi loe ma read ya bu....today taw free phyit nay tar na` computer ka la` myanmar font ya loe naw...
u blog ka ayan mike tal..
nout hma naw...i busy twar pyan p...u ko pyaw nay yin na`....
ဆရာသမားက တော်တော်လက်ဆိပ် ရှိတာပဲဗျ. စာဖတ်ရတာ ချောနေတာပဲ. စကာြးေ့ရေးနည်း သင်တန်းတောင် ဖွင့်လို့ရလောက်တယ်...
တူးပို့ ဒုံဂွမ် ဂျန်ဂျန် ကြိုက်တယ်ဗျို့
“ဘုန်းကြီးဝတ်မလား..ပိုဆိုးတာပေါ့..ညစာပါငတ်မှာ..။” ဆိုတာလေး ကြိုက်တယ်ဗျာ။